mairie-antananarivo – Fiomanana amin’ny fahavaratra
Fiomanana amin’ny fahavaratra
administrateur 12 septambra 2018 Commentaires fermés
FAMAHANA NY OLANA AMIN’NY FIAKARAN’NY RANO
Naharitra efa-bolana teo ny asa fanadiovana sy ny fanamboarana ireo lakan-drano manary ny rano maloto hivarina any amin’ny « canal » Andriambeloma tao amin’ny Fokontany Andranomanalina voalohany, afovoany ary ny Fokontany Anatihazo Isotry. Amin’izao fotoana izao dia efa eo am-pamaranana ny asa tanteraka ny Boriboritany Voalohany sy ny SAMVA, tamin’ny alalan’ny fijerena ireo fomba hanaronana sy ny fanondrotana ny hahavon’ireo « buse » mba tsy hiverenan’ny rano maloto any anaty fokontany indray.
Tsara marihina fa anisan’ny mampikaikaika ny mponina eny anivon’ireto Fokontany 3 ireto ny fiakaran’ny rano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra satria tokoa mantsy hoy ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Boriboritany Voalohany, fa rotsa-korana kely monja dia efa maha dibo-drano eny amin’ireo faritra ireo. Ankehitriny kosa dia efa hita fa misy ny fivoarana taorian’ny asa fanadiovana ary azo heverina ny tsy hisian’ny fiakaran’ny rano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra satria dia efa milamina tanteraka ny lalana fivoahan’ny rano.
Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia tsy mitsahatra ny mitady vahaolana ho an’ny mponina. Ny asa fiatrehana amin’ny fahavaratra ihany koa dia mbola mitohy hatrany eny anivon’ity Boriboritany Voalohany ity.